Izindaba - I-Packaging Innovation evela ku-Bowl Bag
I-Ultrany-General Film Series
I-PHA- Lithium Battery Packaging Series
I-BIONLY-Biodegradable PLA Film Series
Ukulandela ama-noodle asheshayo nokudla okulula okupheka ngokushesha, ukudla okwenziwa ngokushesha nge-microwave eqandisiwe mhlawumbe kungaba umkhiqizo olandelayo odumile.Muva nje, uhlobo olusha lokudla olusheshayo "i-DING DING BAG" ludumile ngaphambi kokuthengiswa komphakathi.Ake sihlole “isikhwama sesitsha” esiwumlingo ndawonye.
Izisebenzi eziningi zasehhovisi zisebenzisa i-oven microwave ukuzifudumeza ukudla ngesikhathi sekhefu lasemini, kodwa futhi ungathola ukuthi uhhavini we-microwave unamathiselwe ithiphu elifudumele “Ungakufaki Ukudla Ephaketheni Lepulasitiki Lokushisisa“.Ngakho-ke, ukuthuthukiswa osheshayo microwave ukudla, impahla emaphaketheni kubaluleke kakhulu.
Ubuchwepheshe Buthuthukisa Ukuthuthukiswa Kwemboni Yokudla, futhi Ukupakisha Kuyisisusa Esibalulekile.
I-DING DING BAG ayidingi ukuncibilikiswa futhi ingapakishwa, futhi idinga kuphela ukushiswa kuhhavini we-microwave imizuzu engu-6.Ingakwazi futhi ukuma kudeskithophu, iklebhule iphakheji bese ishintsha ibe yi-tableware.Asikho isidingo sokuwasha izitsha bese uvele uziphonse emgqonyeni wothuli ngemva kokudla.Ngakho-ke, ungayenza kanjani ingabi isitsha esiphukile lapho udwengula iphakheji?Kudinga ubuchwepheshe bokupakisha ukugcina umuzwa wokuvula umuzwa.
I-TSA, i-BOPA Film yezinyembezi eziqondile, eyethulwe ngu-Xiamen Changsu iyisixazululo esihle sale nkinga, evumela "isikhwama sesitsha" ukuthi sithole ukusika okuqondile okuqondile.I-TSA ayidingi ukusetshenziswa kwemizamo emikhulu noma amathuluzi anjengesikelo ukuze kube lula ukuvula, ingadatshulwa kalula ngezandla ezingenalutho emugqeni oqondile futhi ivimbele okuqukethwe ukuthi kuchitheke.
Ukuthi ukudla okusha osheshayo kwe-microwave eqandisiwe kungaba umkhiqizo olandelayo oqhumayo kuncike egebeni eliphakathi kwemibono emisha kanye nomuzwa wangempela wesipiliyoni.Ukuthembela kufilimu esebenza kahle kakhulu ukuze kuthuthukiswe umuzwa wokuvula isipiliyoni, kungase kube ukusekela okunamandla kokuqanjwa kwe-"Bowl Bag"!
Ikheli: NO, 268, Wengjiao Road, Haicang District, Xiamen, Fujian, China